नेविसंघ अध्यक्षसंग अब संवाद होइन संघर्ष हुन्छ… – SamajKhabar.com
संबाददाता : Samaj Khabar प्रकाशित मिति: ६ माघ २०७४, शनिबार ०८:०३
नेपाल विद्यार्थी संघमा पछिल्लो समय बढ्दो विवादले गुटगत राजनीतिलाई प्रश्रय दिएको छ । खासगरी नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महर र उपाध्यक्ष रामप्रसाद अधिकारीबीचको विवाद अहिले सतहमा छ । ३ नम्बर प्रदेश समितिका संयोजक समेत रहेका अधिकारीलाई अनुशासनको कारवाही गर्ने संस्थापन पक्षको तयारीले नेविसंघमा तरंग पैदा भएको छ भने एउटा पक्षले पत्र काटेर अध्यक्ष महरलाई नै स्पष्टीकरण सोधेको अवस्था छ । नेविसंघ विवाद के हो भन्नेबारे उपाध्यक्ष रामप्रसाद अधिकारीसंग गरिएको कुराकानी ।
नेपाल विद्यार्थी संघमा विवाद के हो ?
नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष गैरजिम्मेवार र विधानसम्मत नचल्दा विवाद भएको हो । अध्यक्ष विधान र नियमावली अनुसार चल्ने र सबै केन्द्रिय समितिका पदाधिकारी एवं केन्द्रिय समितिका साथिहरुसँग छलफल गरेर अगाडी बढेको भए यस्तो परिस्थिती सिर्जना हुने थिएन । ११ औँ अधिवेशन सम्मन्न भयो , अधिवेशन सम्पन्न निर्देशन समितिले सम्पन्न गर्दैगर्दा जुन जिम्मेवारी केन्द्रिय समितिलाई दिएको थियो । त्यो जिम्मेवारी १७ महिना वितिसक्दापनि मुकदर्शकमात्र भएर हामी बस्यौँ । केन्द्रिय समितिको पहिलो बैठकमा हामीलाई निर्देशन समितिले ११ जिल्ला , विवादित १३ जिल्ला र जिल्ला क्याम्पसहरुमा अधिवेशन सम्पन्न गर्न र समस्या समाधान गर्न जुन जिम्मेवारी दिएको थियो , त्यो हामीले अध्यक्ष ज्यूलाई पटकपटक आग्रह गर्दापनि उहाले केही गर्न चाहनुभएन । त्यसै १७ महिना वित्यो । पटकपटक संगठनलाई चलायमान र गतिशिल बनाउन आग्रह गर्यौँ तर उहाँले केही गर्नुभएन अझ भनौ चाहनुभएन । अध्यक्ष ज्यूले जसरी संगठनमा सबैसँग समन्वय गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने हो त्यो उहाले चाहनुभएन, नितान्त गुटगत रुपमा प्रस्तुत हुनुभयो । कोठामा बसेर निर्णय गर्ने, अनाधिकृत तवरबाट केन्द्रिय समितिका पदाधिकारी एवं सदस्य साथिहरुलाई जानकारी नै नदिई जुन कार्य गर्नुभयो , त्यसले संगठनमा विवाद सिर्जना गर्यो । हामीले पटकपटक अध्यक्ष ज्यूलाई सबैको अध्यक्ष हुनुहोस् गुट वा झुण्डको होइन भनी आग्रह गर्यौ । तर उहाँले गुटगत रुपमा त अगाडी बढ्नु नै भयो अझ संगठनलाई विधान विपरित आमन्त्रित केन्द्रिय सदस्यको मनोनय लगायतको काम विधि विधान विपरित गर्दै अगाडी बढ्नुभयो । अझ हामी मौन नै बस्यौ । तर स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समेत नेविसंघलाई झोलामा समित गराइयो । नेविसंघलाई अझ चलायमान बनाउनको निम्ति हामीले योजना लिएर जाँदा उहाँ नीति होइन नेताको बोली र आश्वासनको पछि लाग्नुभयो । देशभरका साथीहरुको आग्रहमा संगठनको विधान र नियमावली बमोजिम चलायमान बनाउँदै हामीले आफ्नो गतिविधी गर्दा अध्यक्षलाई मन परेन भन्दैमा विधान विपरित भन्न पाइन्छ र ?
नेविसंघलाई पहिलेको अवस्थामा लैजान के गर्नुपर्ला ?
नेविसंघलाई शशक्त र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश नं ३ का समितिका साथीहरुसँग सल्लाह र छलफल गरी अध्यक्षको राय लिएर चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, गगन थापा, गुरुराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल, उमेशजंग रायमाझीलगायतका नेताहरुको उपस्थितीमा अनुपम फुडल्याण्ड बत्तीसपुतलीमा काँग्रेस पुर्नजागरण अभियान सञ्चालन ग¥यौँ । यस्तै प्रदेश नं ३ को प्रशिक्षण कार्यक्रम काँग्रेसका प्रभावशाली नेता अर्जुननरसिंह केसी प्रमुख अतिथी तथा केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीको विशेष अतिथीमा धादिङबेशीमा कार्यक्रम ग¥यौँ । हामी नेविसंघलाई पहिलेको अवस्थामा फर्काउनका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्दा अध्यक्षज्यू कोठे बैठक र गुठ उपगुठ बनाउने काममा व्यस्त हुनुभयो । अध्यक्ष ज्यूले विधान विपरीतको काम गरेकाले अनुशासन समितिको संयोजक राजेश रैनीयारले अध्यक्षमाथी नै अनुशासन विपरीत काम गरेकाले स्पष्टिकरण नै सोध्नुभयो । अध्यक्ष यहि अवस्थामा चल्ने हो भने उहाँबाट नेविसंघ अगाडि बढ्न सक्दैन ।
नेविसंघमा देखिएको समस्यालाई कसरी समाधान गर्नै त ?
अध्यक्ष गुठभन्दा माथि उठेर सबै क्षेत्रलाई समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सबैको अध्यक्ष बन्नुपर्छ । निर्वाचित पदाधिकारी र साथीहरुसँ संगठन अगाडि बढाउने बारेमा छलफल गर्नुपर्छ । विधान नियमावलीमा टेकेर निर्णय लिनुपर्छ । संगठनको हित विपरीतका निर्णयहरु फिर्ता लिनुपर्छ ।
अहिलेको अवस्थामा तपाई अध्यक्षसँग वार्ता गर्न तयार हुनुहुन्छ ?
हामी अध्यक्षसँग वार्ता गर्न तयार छैनौ । आफ्नो पाराले संगठनलाई अगाडि लैजाने अध्यक्षसँग हामी वार्ता गर्दैनौँ । हामी पार्टी सभापतिलाई भेटेर अध्यक्षले गरेका कुराहरु राख्छौँ । विधानभन्दा बाहिर गएर गरेका निर्णयका बारेमा हामी पार्टी सभापतिसँग छलफल गछौँ ।
६ माघ २०७४, शनिबार ०८:०३ मा प्रकाशित